KML ဖြင့်ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြသခြင်း Martech Zone
KML ဖြင့် Google Map တွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြသခြင်း
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 18, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဤသည်သည်မြေပုံတွင်လမ်းကြောင်း (လိုင်းအပိုင်းအစများ) ကိုပြသခြင်း၏အပိုင်း ၂ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါကူညီခဲ့သည် Indianapolis ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်း Indianapolis တွင်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာကို သုံး၍ တည်ဆောက်ထားသောမယုံကြည်နိုင်လောက်သည့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစက်ဘီးနှင့်လမ်းများကိုမြေပုံထုတ်ခြင်းဖြင့် အပိုင်း ၁ ကသင်၏လမ်းကြောင်းများကိုကြံစည်ရန် Google Earth ကိုမည်သို့အသုံးချရမည်နည်း နှင့်သူတို့ကိုပို့ KML ဖိုင်.
ဒီညငါနောက်ဆုံးမှာစမ်းသပ်မှုလမ်းညွှန်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့မြေပုံကိုငါပြန်ပို့လိုက်တယ် မှ Ian မှတက်တွန်းရန် ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်း ဆိုဒ် ၎င်းသည် visitors ည့်သည်များချဲ့ရန်၊ ဂြိုလ်တုမြင်ကွင်းသို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်တည်ငြိမ်သောရုပ်ပုံထက်မြေပုံနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤကိစ္စပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏အရေးတကြီးဆောင်ရွက်မှုကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့ပြီး Gail Swanstrom နှင့် Brian Payne (President, ဗဟိုအင်ဒီယားနားလူထုဖောင်ဒေးရှင်းဘီလ် McKibben ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်စနေနေ့တွင်။ ဂေးလ်နှင့်ဘရိုင်ယန်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရာသောသူများဖြစ်သည်။ ကြင်နာပြီးစွမ်းအင်ပြည့်သည်။ သူတို့ကိုငါမလျှော့ချနိုင်ဘူး။
ပရောဂျက်တစ်ခုကျပြီ! သွားရန်အနည်းငယ်ပို! ဒီမြေပုံကိုတင်လိုက်ရင်ဒီ post ကို link တစ်ခုနဲ့ update လုပ်မယ်။
Tags: ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာgeolocationမြေပုံ googleKMLkml ဖိုင်path
?.::: HeroTurko.Net Technology Blogging Photoshop :::?။
မတ်လ 19, 2008 မှာ 11: 02 AM
မတ်လ 19, 2008 မှာ 4: 20 pm တွင်
ပို့စ်ကောင်း။ ကျွန်ုပ်သည် စတိုးဆိုင်/စားသောက်ဆိုင်/စသည်ဖြင့် တည်နေရာရှာဖွေသူနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော "အကောင်းဆုံးလမ်းရှာဖွေသူ" ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးကို ယာဉ်မောင်းများကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာရန်နှင့် ထိုလမ်းတစ်လျှောက်တွင် အကောင်းဆုံးရပ်တန့်မှုများကို ကူညီရန်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Google Maps ကို အခြေခံထားတာဖြစ်လို့ ဒီပို့စ်က ကျွန်တော့်အတွက် ဗဟုသုတ လက်ဆောင်တစ်ခုလိုပါပဲ 🙂 အချိန်မှန် 🙂
မတ်လ 20, 2008 မှာ 12: 05 pm တွင်
Indianapolis ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းမြေပုံကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါသည်။